Wariye Jaamac Ukun oo u shaqeyn jiray Radio Kulmiye ayay ciidamada Nabadsugidda ka kaxeysteen Goob lagu shaaheeyo oo ku dhow xarunta idaacadda waxaana ilaa imika la garanayn sababta rasmiga ah ee ka danbeeysay xariga loo geystay wariyeyaashani.
Wariye Khadar Max'uud Xareed oo isna ka shaqeyn jiray idaacadda Goobjoog horena ula soo shaqeeyay idaacado iyo Tv-yo kala duwan ayaa la sheegay in ciidamada nabadsugidda ay ka kaxeysteen goob u dhow idaacadda Goobjoog oo uu ka shaqeynayay, waxaana la sheegay in ciidamadu ay la dhaceen qoriga liifkiisa xilligii ay kaxeynayeen.
Ayaan Gooni oo ah Xaaska wariye Khadar Max'uud Xareed oo aan qadka teleefonka kula xiriiray ayaan ka wareystay xariga loo geystay ninkeeda, waxayna sheegtay in ciidamo katirsan Nabadsugidda ay kaxeysteen islamarkaasina loo sheegay in la geeyay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya halkasoo su'aalo lagu weydiinayo.
"Walaahi ma garanayo sababta lagu heysto, shalay ayaan tagay madaxtooyada waa la ii diiday in aan la kulmo, waxaana la sheegay in si xun loo jidilay, maanta 8-da duhurnimo ayaan maxkamad soo saareynaa ayay i dheheen" ayay hadalkeeda raacisay.
Ilaa imika lama garanayo sababta ka danbeeysay xariga wariyeyaashani, haseyeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in lagu eedeynayo in ay xiriir la leeyihiin xoogagga Al-shabaab.
Labadani wariye ayaa hore uga howlgeli jiray Magaalada Kismaayo, waxaana wariye Khadar uu magaalada Muqdisho yimid bishii June ee sanadii 2011, iyadoo Wariye Jaamac Ukun uu magaalada Muqdisho ku suganyahay ku dhowaad Bil, waxaana wariyeyaal ku dhow dhow labadani saxafi ay inoo sheegeen in habayaraatee aysan wax lug ah ku lahayn Al-shabaab islamaraasina ay magaalada Muqdisho u yimaadeen sababo la xiriira ammaankooda.